Senator Abshir Abshir Bukhari “Waxaan rabaa in Galmudug laga dhigo 12-qabiil” – Kalfadhi
September 6, 2019 Hassan Istiila
Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha Aqalka Sare mudane Abshir Abshir Maxamed Axmed, oo xalay khudbad ka jeediyay furitaanka shir-weynaha dib-u-heshiisiinta Galmudug, ayaa sheegay in dadka barakacayaasha ee ku nool deegaannada Galmudug la siiyo metelaad.
“Galmudugta la dhisayo oo la yiri waa 11-qabiil, waxaan rabaa in aan fursadan uga faa’iideysto in Galmudug laga dhigo 12-qabiil. Qabiilka 12-aad waa dadka barakacayaasha ah ee ku nool deegaanka Galmudug, kuwaas oo tiradooda ay gaareyso 90-kun oo qof” ayuu yiri.
Dhinaca kale waxaa uu sheegay in dadka barakacayaasha ah ee jooga dalka Soomaaliya in lagu qiyaasay hal milyan iyo bar. Meel kasta oo ay barakacayaasha ay joogaan waa in ay helaan metelaad, gaar ahaan maamul-gobolleedyada. Waxaan ku goobaabinayaa Galmudug in ay iyadu bilowdo.
Xildhibaanada federaalka ee Puntland iyo wasaaradda waxbashada oo ka heshiiyay muranka shahaadada dugsiyada sare